DEG DEG:Ciidamadii ugu badnaa Puntland oo gaadhay Tukaraq & Cutubyo uga soo baxay Gal-Gala Dagaalka Laascaanood…. – Puntland News.net
Home 2018 January 14 Puntland News, Somali News DEG DEG:Ciidamadii ugu badnaa Puntland oo gaadhay Tukaraq & Cutubyo uga soo baxay Gal-Gala Dagaalka Laascaanood….
Wararka Warsidaha Puntlandnews.net uu xiligani ka helayo jiidaha hore ee deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool oo ay isku hor fadhiyaan ciidamada Puntland iyo Somaliland ayaa sheegaya in xaalad dagaal laga dareemayo deegaankaasi.
Wararka waxa kale oo ay intaasi kusii darayaan in cutubyo ka tirsan ciidamada Puntland ay gaadheen deegaankaasi kuwaas oo kasoo ruqaasaday deegaanka Buuraleyda Gal-Gala iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolka Bari waxaana madaxda dowladdu ay isla qaateen dagaal ka dhan ah ciidamada maamulka Somaliland.
Madaxweynaha Puntland Dr. C/weli Maxamed Cali Gaas, Gollaha Wasiirada iyo Xildhibaanada Baarlamaanka Puntland ayaa iyaguna ku dhawaaqay xaalad dagaal oo deg deg ah, waxaana iminka la filayaa in ciidamada Puntland ay qaadaan weerarkii ugu horeeyey ee ka dhanka ciidamada maamulka Somaliland ee ku sugan deegaanka Tukaraq.
Ciidamada Puntland oo ku gaashaaman gaadiidka dagaal ayaa isku balaadhiyey jiidaha hore ee deegaanka Tukaraq kuwaas oo weerar xoogan la damacsan ciidamada Somaliland, waxaana xaaladu ay haatan tahay mid halisteeda leh.
Qaar kamid ah dadka deegaanka oo la hadlay Warsidaha Puntlandnews.net ayaa sheegay in deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool ay iminka xiisada ka taagan sii xoogaysanayso maadaama ciidamo cusub ay gaadheen deegaankaasi.
Madaxweynaha Puntland oo hore u baajiyey dagaalo culus oo qorshaynayeen ciidamada Puntland ayaa iminka ku dhawaaqi raba xaalad dagaal maadaama sababaha loo hakiyey dagaalkaasi ay ahayd booqashadii madaxweyne Farmaajo uu ku joogay Garoowe.
Wixii warar ah ee kusoo kordha warkaasi kala soco Puntlandnews.net